Maitre Hanitra Razafimanantsoa : « Tsy hihemotra manoloana ny herim-pamoretana »
03/01/2019 admintriatra 0
Nanoloana ny zava-nitranga omaly tetsy Analakely, tamin’ny fidiran’ny mpitandro filaminana an-tsehatra nanaparitaka ny vahoaka tonga marobe namaly ny antson’ny mpomba ny kandidà laharana faha-25, Marc Ravalomanana, dia nanambara ny avy amin’ ny KMMR sy ny …Tohiny
Roland Ratsiraka : Tsy nisy nifidy tokoa ve?
Tsy nahazo afa-tsy 0,43% tokoa ve ny kandidà Roland Ratsiraka nandritra ny fihodinana voalohany kanefa niaraha-nahita ireny vahoaka maro be nanara-dia azy nandritra ny fihodinana voalohany ireny? Tena tsy nisy nifidy an’ity kandidà ity tokoa …Tohiny
Trano nirehitra teny Ampitatafika : Lehilahy iray no may
May ny vatan’ny lehilahy iray nanavotra entana. Nanao izay ho afany tamin’ny fanavotana ny afo tsy hihitatra ity lehilahy iray ity, no niharan’ny famaizana, ka may teo amin’ny kibony sy ny tanany. Io no vokatry …Tohiny
Faran’ny taona 2018 : Tsy nandeha ny tsenan’ny vorona
Tsy toa ny isan-taona fa tsy lany ny akoho amam-borona teny an-tsena ny faran’ny taona 2018. Nitaraina avokoa ireo mpivarotra, toa ny teny Anosibe, Anosy ary 67ha. Zara raha nahalafo entana izy ireo. Niakatra avokoa …Tohiny
Fandrebirebena sisa no nataon’ny MAPAR sy ny TIM tamin’ireo vahoaka notarihin’izy ireo nidina teny amin’ny kianjan’ny 13 Mai taorian’ny nitsanganan’ny governemanta Ntsay Christian. Fandrebirebena sisa ireny kabary tsara lahatra nataon’ny Me Hanitra Razafimanantsoa ireny izay ...Tohiny
Jolay 2012 : Nitsahatra ny Free FM
Depiote Harijaona Randriarimala : “Aza atao takalon’aina ny mpianatra ”